स्वास्थ्य – Page 43 – Medianp
के तपाई आफ्नो अनुहारमा सुन्दरता ल्याउन चाहनुहुन्छ ?सुत्नु भन्दा अगाडी यो उपाय अपनाउनुहोस् १००% ठिक हुन्छ
Media NPप्रकाशित मिति: बिहिबार, कार्तिक २९, २०७५१०:५५0
काठमाडौ । के तपाई आफ्नो नराम्रो अनुहारमा चमक ल्याउन चाहनुहुन्छ ? अब त्यासो भए त्यसका लागी तपाईले विभिन्न ठाउँमा धाएर पैसा र समयको खर्च गर्नु पदैन् । त्यसका साथै विभिन्न कस्मेटिक सामानहरु पनि लगाउनु पदैन्
सावधान ! तपाईहरुले सेवन गर्ने जमराको जुस औषधी होइन् !
मिडिया एनपी एनपीप्रकाशित मिति: बिहिबार, कार्तिक २९, २०७५१०:४७0
काठमाडौँ, २९ कात्तिक । पछिल्लो समय जमराको जुसलाई रोगहरु निको पार्ने निकै महत्वपूर्ण औषधीको रुपमा प्रयोग गर्दै आएको पाइन्छ । बिहान मर्निङवाक गर्ने मानिसहरुको लागि जमराको जुस नियमित सेवन नै बनेको छ । यस्तै कतिपय
मिडिया एनपी एनपीप्रकाशित मिति: बुधबार, कार्तिक २८, २०७५१७:४०0
काठमाडौँ, २८ कात्तिक । युरीक एसिड रगतमा हुने निकै महत्वपूर्ण तत्व हो । यसले शरिरमा एन्टी अक्सिडेन्ट को काम गर्छ । शरिरमा युरीक एसिडको मात्रा बढी भयो भने जोर्नी सम्बन्धी समस्याहरु आउने गर्छ । युरीक
सावधान : खोकी लाग्दा झुक्किएर पनि यस्ता खानेकुरा नखानुहोस् |
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: बुधबार, कार्तिक २८, २०७५१५:२२0
खोकीले प्राय सबैलाई सताउने गर्छ । खोकी जुनसुकै शिजनमा पनि लाग्छ । गर्मी र जाडो दुबै मौसममा खोकी लाग्ने गरेको हुन्छ । खोकी कुनै एउटा कारणले मात्रै लागेको भन्न सकिँदैन् । खोकी लाग्ने बिभिन्न कारणहरु रहेका
शारीरिक सम्पर्क गर्नु अगाडी सधैँ महिलाहरुले ढाट्ने गर्छन यी ५ कुराहरु, के के हुन् ती कुराहरु हेर्नुहोस्
Media NPप्रकाशित मिति: बुधबार, कार्तिक २८, २०७५१३:०७0
काठमाडौ । भनिन्छ जीवन चल्नको लागी जीवनसाथीको भूमिका अपरिहार्य हुन्छ । किनकी दुवैको आफ्नो सफल जिवन फुलाउन र भुलाउनका लागी यो एक संसारको प्रक्रिया नै हो । तर श्रीमान र श्रीमती बीचमा कतिपय कुराहरुमा समझदारी नमिल्दा
के तपाईलाई कुनै रोगले त सताएको छैन ? अब जिब्रोमा चम्चा राखेर १ मिनेटमैं यसरी पत्ता लगाउनुस् त्यो रोग,( जान्नुहोस्)
Media NPप्रकाशित मिति: आइतबार, कार्तिक २५, २०७५१५:०१0
काठमाडौ । के तपाई विरमी त हुनुहुन्न ?के कहिल्यै अस्पतालमा गएर चेकअप गराउनुभएको छ । कि जहिले समस्या आउछ ,त्यहीबेला उपचार गरौला भन्ने सोचमा हुनुहुन्छ , यदि त्यसो हो भने त्यो बानी हटाउनुहोस । किनकी
याद गर्नुहोस्, तपाईको यस्तो बानीले मृगौला खराब पार्छ !
मिडिया एनपी एनपीप्रकाशित मिति: आइतबार, कार्तिक २५, २०७५१०:३२0
काठमाडौँ,२५ कात्तिक । आफु स्वस्थ्य रहनुमा हरेक व्यक्तिको जीवन शैलीको विशेष महत्व रहेको हुन्छ । शरिर स्वस्थय राख्नको लागि दैनिक रुपमा गरिने क्रियाकलापमा सावधानी अपनाउनु विशेष महत्व रहने गर्छ । पछिल्लो समय आफ्नो दैनिकीलाई ख्याल
Media NPप्रकाशित मिति: मङ्गलबार, कार्तिक २०, २०७५१६:४४0
काठमाडौ । के तपाईलाइ मेवाको फाइदाको बारेमा थाहा छ ? मेवाको फलमात्र हैन, बोक्रा र पातले पनि हाम्रो शरिरलाई अति नै फाइदाजनक रहेको विज्ञहरुले बताएका छन् । त्यसैले मेवालाई स्वादिलो तथा स्वास्थ्यवर्धक फल भनिएको हो
काठमाडौँ ,२० कात्तिक । अस्वस्थ खानपानको कारण मानव शरिरमा विभिन्न समस्याहरु देखा पर्ने गर्छ । त्यतिमात्र हैन् मानिसको दैनिकी जीवन शैलीले पनि मानिसहरुमा विभिन्न रोगहरु देखा पर्ने गर्छ । मटोेपनको कारण आफ्ने शरिरलाई फिट राख्नको
नेपालमै जो कोहीलाइ पनि ५० प्रतिशत छुट दिने औषधी पसल भेटियो,जसले महगो पैसा तितेर औषधी किनेकालाई सुविधा दियो
Media NPप्रकाशित मिति: सोमबार, कार्तिक १९, २०७५१८:२७0
काठमाडौ । काठमाडौको महाराजगञ्ज स्थित त्रिवि शिक्षण अस्पताल नजिक रहेको मनमोहन कार्डियो थोरासिक भास्कुलर एन्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरले औषधिमा लेखिएको एमआरपी मूल्यभन्दा ५० प्रतिशत छुट दिदै आएको छ । यहाँ वषौदेखि ५० प्रतिशत कम र केही सर्जिकल
Previous 1 … 42 43 44 … 129 Next